အမေးအဖြေများ | GlobaliGaming.com Partner Program
အဘယ်မျှကာလပတ်လုံးငါ့ application ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့ယူလိမ့်မည်?
ကျနော်တို့အတွင်းအားလုံး applications တွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့ရည်ရွယ်ထား 24 မှတ်ပုံတင်နာရီ.
ငါသည်ငါ့ကိုယ်ပိုင်ဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးလျှင်ပင်တစ်ဦး Affiliate ဖြစ်လာနိုင်သ?
ဟုတ်ကဲ့သင်သည်တတ်နိုင်. အကြှနျုပျတို့သညျကိုသုံးနိုင်သည်ကိုအခြားရွေးချယ်စရာ tools တွေကိုပေး (SMS ကိုကုဒ်တိုများ, QR Code ကို, တယ်လီဖုန်း Hotline စသည်တို့ကို) ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှတ်တံဆိပ်မြှင့်တင်ရန်. ရိုးရှင်းစွာအသင်တို့ကိုမရရှိနိုင်ရွေးချယ်စရာဆှေးနှေးဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Affiliate မန်နေဂျာကိုဆက်သွယ်.
You can track your earnings by logging into your partners.globaligaming.com affiliate account. ဒီနေရာတွင်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးစွမ်းဆောင်ရည်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖို့အစီရင်ခံစာများနှင့်စာရင်းဇယားတစ်ခုပြည့်စုံရွေးချယ်ရေးတှေ့လိမျ့မညျ.
သငျသညျကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်င်ငွေပမာဏမှမကန့်သတ်ရှိပါတယ်, ကအားလုံးကိုသင်၌သွင်းထားမည်မျှအချိန်နှင့်ကြိုးစားအားထုတ်မှုမှဆငျးသကျလာ. ကျနော်တို့ဝင်ငွေဝေစုအပါအဝင်အလွန်အမင်းယှဉ်ပြိုင်ခြင်းနှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ကော်မရှင်အဆောက်အဦများ၏အကွာအဝေးကိုဆက်ကပ်, တကြ် CPA နှင့်စပ်အပေးအယူ. သင်တို့သည်ငါတို့၏ကော်မရှင်စာမျက်နှာပေါ်တွင်အပြည့်အဝအသေးစိတျကိုပြန်လည်သုံးသပ်နိုင်.
Affiliate ငွေပေးချေမှုကိုယခင်လ၌ရရှိခဲ့သည်သင့်ရဲ့ကော်မရှင်အဘို့အသီးအသီးတစ်လ၏ 15 ရက်နေဖြင့်လုပ်ပါလိမ့်မည်.
ကျနော်တို့လက်ရှိမှသာ BACS အားဖြင့်ငွေပေးချေမှုကိုဆက်ကပ် (£ 100 အမိ), paypal (£ 200 မိနစ်) နှင့်ဘဏ်မှငွေလွှဲခြင်း (£ 500 မိနစ်). ငွေပေးချေမှုမပြုမီရောက်ရှိခံရဖို့လိုအပ်ကြောင်း option တခုစီအတှကျနိမ့်ဆုံးခုံလွတ်ရှိပါတယ်.
သင့်ရဲ့ငွေပေးချေမှုကိုးကားတူကြည့်ရှုမည်: GIG အပေါင်းအဖေါ်များဧပြီလက 2016 LucksCas, GIG အပေါင်းအဖေါ်များသြဂုတ်လ 2016 CoinF, GIG အပေါင်းအဖေါ်များဒီဇင်ဘာလတွင် 2016 SlotF, GIG အပေါင်းအဖေါ်များ CoinF, GIG အပေါင်းအဖေါ်များ SlotF, GIG အပေါင်းအဖေါ်များ LucksCas
GlobaliGaming အပေါင်းအဖေါ်များနှိပ်ပါစျေးကွက်များ, Ltd ကပိုင်ဆိုင်နှင့် operated ဖြစ်ပါတယ်, အင်္ဂလန်နှင့်ဝေလနယ်များတွင်မှတ်ပုံတင်ထား, ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်နံပါတ် 09067768. ကျွန်တော်တို့ရဲ့မှတ်ပုံတင်ထားသောလိပ်စာဖြစ်ပါသည် Salisbury အိမ်, ဘူတာရုံလမ်း, ကိန်းဘရစ်ချ် CB1 2LA.
သင်သည်မည်သည့်နောက်ထပ်မေးခွန်းများသို့မဟုတ်ရိုးရိုး Affiliate မန်နေဂျာတဦးမှပြောဆိုရန်ဆန္ဒရှိလျှင်သင်ရိုးရှင်းစွာကျွန်တော်တို့ရဲ့သွားရောက်နိုင် ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဆက်အသွယ်အသေးစိတ်ကိုစာမျက်နှာ.
ရှာတွေ့သည် ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ Affiliate Program ကိုအကြောင်းပိုမို